Otu esi eme ka ngwa ngwa na 960 fps na uzo di elu maka vidiyo 4K na OnePlus 7T | Gam akporosis
Na-azọrọ na OnePlus 7T, Onye na-emepụta China weputara ngwanrọ ngwanrọ ọhụrụ na otu n'ime ihe ndị na-eme nso nso a. A awa ole na ole gara aga, dị ka ihe na-egosi na akụkọ nke a Chinese ọrụ posted on Reddit, OTA ọhụrụ maka ngwaọrụ a malitere ịhapụ China. Nke a pụtara na mgbasawanye ya amalitela, na ọ ga-agbasa n’ụwa niile n’oge na-adịghị anya, dịka ọ na-adịkarị na mmelite akara.
Tupu nke ahụ emee - mana ọ na - eme ma ị nwere ike ịnata ya na ngalaba gị na obodo gị -, anyị na - akọwa etu esi arụ ọrụ abụọ kachasị mkpa ozi na - abịa na njedebe a na ngwugwu ngwa ngwa ọhụrụ, nke bụ super nwayọ ngagharị mode na 960 fps na mbara n'akuku igwefoto maka 4K video, atụmatụ abụọ nke OnePlus 7T anaghị etu ọnụ n'ihu.
Yabụ ị nwere ike rụọ ọrụ ọnọdụ nwayọ nwayọ nwayọ na 960 fps yana igwefoto obosara sara mbara maka vidiyo 4K na OnePlus 7T
Igwefoto OnePlus 7T
Onye OnePlus 7T na-aga n'ihu n'usoro dịka otu n'ime smartphones kachasị mma taa. N'ịbụ ndị na-achụ site na Snapdragon 855 Plus, A pụghị iwere ya dị ka ekwentị mkpanaka, nke megidere ya, ebe ọ bụ na chipset a dị elu ka nwere ogologo ndụ n'ihu ya dịka ọ bụ otu n'ime ndị kachasị arụ ọrụ.
N'agbanyeghị mkpa na ewu ewu na ahịa dị oke ọnụ, OnsPlus 7T egosighi 960fps ngwa ngwa ngwa ngwa na igwefoto obosara maka vidiyo 4K na OnePlus 7T, àgwà abụọ ndị a na-ahụkarị ugbu a na ntanetị ọhụrụ ndị ọhụrụ. Mana nke a bụ ihe edozila na mmelite ọhụrụ ahụ, nke rutere na beta nke atọ nke OxygenOS nke ụlọ ọrụ ahụ wepụtara na atọ nke atọ na nso nso a wee nwee nsogbu kachasị ọhụrụ ya n'izu gara aga.
Edeghị atụmatụ abụọ a na mgbanwe nke OxygenOS Beta kachasị ọhụrụ maka OnePlus 7T, yabụ amataghị ha.
Ihe ọchị bụ na, dị ka ọnụ ụzọ ámá Gizmochina Isi ihe, Ihe mmetụta 586 MP Sony IMX48 na OnePlus 7T anaghị akwado ọnọdụ ndekọ Slow Motion na 960 fps. N'ihi ya, ọrụ dị na ekwentị nwere ike iji ụfọdụ interpolation usoro okpukpu abụọ nke ọnụ ọgụgụ nke okpokolo agba kwa abụọ. Nke ahụ pụtara na ngwa ngwa ngwa ngwa ngagharị vidiyo na ekwentị a nwere ike ọgaghị adị ka ọ dị na ekwentị ndị ọzọ. adịchaghị. N'otu ụzọ ahụ, anyị na-akọwa otu esi amalite ya na OnePlus 7T nke nwere ya.
960fps mode ndekọ gbakwunyere na OnePlus 7T
Na ajụjụ, gbaa na super slow motion na 960 fps ịkwesighi ime ihe ukwu. A na-agbakwunye nhọrọ ahụ na abụọ emejuputara site na mbido, nke bụ HD 720p na 480 fps na FullHD 1080p na 240 fps. N'ihi ya, Ihe ị ga - eme bụ imeghe ngwa igwefoto ma gbatịa nhọrọ igwefoto site na ala elu, nke bu nke ugha Motion (nwayọ nwayọ); ebe ị ga-ahọrọ HD 720p na 960 fps, nke bụ ọhụrụ mode na-abịa na nke a na-adịbeghị anya ulo oru update.
Na nhọrọ vidio nke gosipụtara na otu menu a gbatịrị agbatị, ọnọdụ ndekọ na mkpebi 4K na 30 fps na ihe mmetụta dị obosara na-egosikwa, ekele maka nsụgharị ọhụrụ nke ROM. Only na-ahọrọ ya ka emechaa malite ndekọ nke ụdịdị ahụ. Na mbụ, ọ ga-ekwe omume ịdekọ ya na oke obosara na mkpebi FullHD na ngwaọrụ a, ọ bụ ezie na na mbụ, ọ gaghị ekwe omume iji oghere a maka ndekọ, nke gbanwere na mbata nke Android 10 na ekwentị.
Ihe a na-emebu: anyị na-akwado ka onye ọ bụla nwere ekwentị jikọọ na netwọk Wi-Fi siri ike ma dị elu iji budata wee wụnye ngwugwu beta ọhụrụ ahụ, iji zere oriri achọghị nke ngwugwu data onye na-eweta ya. Ọ dịkwa oke mkpa inwe ọkwa batrị dị mma iji zere nsogbu ọ bụla nwere ike ime n'oge usoro nrụnye.
Biko mara nke ahụ ọ bụghị OnePlus 7Ts niile ga-enwetaworị mmelite a. O kwere omume, dị ka anyị tụrụ aro na mbido, na ọ na-agbasa nke nta nke nta, site na ókèala, nkeji, na ihe ndị ọzọ. A naghị enye ụdị ngwugwu ngwa ngwa ndị a n'otu oge zuru ụwa ọnụ, kama jiri nwayọ. Ya mere, ọ nwere ike were ụbọchị ole ma ole ma ọ bụ izu tupu ọ eruo ihe nlereanya gị. N’otu aka ahụ, ọbịbịa ya n’ụwa niile ga-eme ka o sie ike, ma ọ bụ n’ụdị beta ọ dị ugbu a ma ọ bụ n’ụdị ya n’enweghị oke njehie.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Esi rụọ ọrụ 960fps wide-angle slow motion mode maka 4K vidiyo na OnePlus 7T
Mepee ekwentị gị site na iji mbinye aka, ịbịaru ma ọ bụ akara